Phendula umnxeba wasendle xa uhlala kule ndlwana yeholide e-Benezette! 'I-Elk Terrace Lodge' inamagumbi okulala ayi-2, amagumbi okuhlambela ayi-2, kwaye inokwamkela iindwendwe ezili-13. Yonwabela imbonakalo entle yeentaba, jonga ii-elk zizulazula kwipropathi, kwaye ujonge ngeenkwenkwezi ukusuka kwi-tub eshushu. Ikhabhinethi entle ye-A-frame ibekwe kwindawo engaphezulu kweehektare ezi-3 ecaleni kwendlela yabucala esembindini wePennsylvania Elk Range. Imida kumhlaba weHlathi leLizwe elithetha ukuba ukuhlala kwakho kuya kuba namathuba okuzonwabisa!
Igumbi lokulala 1: Ibhedi yokumkanikazi | Igumbi lokulala 2: Ibhedi ye-Twin/Queen Bunk | Loft: Ibhedi yaseKing, iSofa yokulala ngokupheleleyo, iibhedi ezimbini zamawele | Den: Sofa yokulala ngokupheleleyo
Nje ukuba ungene 'kwi-Elk Terrace Lodge' uya kuziva ukhululekile. Igumbi lokuhlala libonisa iisilingi ezivalekileyo kunye nendawo yomlilo yegesi eqinisekileyo ukukugcina ushushu ngobusuku basebusika. Iifestile ezinkulu kunye neengcango zeglasi ezityibilikayo eludongeni zenza kube lula ukubona izilwanyana zasendle zonke kodwa ziqinisekisiwe ukudlula.
Yonwabile kwisofa enkulu yecandelo kwaye uphumle. Xa ungaxakekanga ubukele i-elk, vele uxabise inkampani yamaqabane akho ohambo. .
Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo lilungele abapheki kunye nabaqalayo ngokufanayo. Ngezixhobo zentsimbi ezihlaziyiweyo kunye nendawo eyaneleyo yokubala, uya kuba nayo yonke into oyifunayo ukulungiselela ukutya okumnandi. Yonwabela izidlo zakho kwitafile yokutyela okanye ngaphandle phantsi kwepatio egqunyiweyo enetafile yepikiniki.
Xa ungaphandle, yosa iimarshmallows phezu kwegodi lomlilo okanye udlale umdlalo wamahashe njengoko ilanga litshona emva kweentaba. Ukuphumla ngakumbi, tyibilika kwi-tub eshushu. Gcina amehlo akho evulekele iimbono ezingathintelwanga zamakroza kunye neenkwenkwezi ezidubulayo.
Le ndlu intle ye-A-frame ibandakanya amagumbi okulala ama-2, kunye namalungiselelo okongeziweyo okulala kwigumbi eliphezulu kunye nesofa yobungakanani obugcweleyo bokulala kuzo zombini iindawo eziphakamileyo kunye nomngxuma-indawo nganye iqhayisa nge-rustic decor.
AmaNgqina elk kwindawo yawo yokuhlala yendalo kwi-Winslow Hill Elk Viewing Area, iimayile ezi-2 ukusuka ekhaya. Le yeyona ndawo idumileyo yokubukela ePennsylvania kwaye ikubonelela ngeendlela ezininzi kunye neendlela ezimdaka zokuhlola kunye nokujonga ii-elk. Amaxhama anomsila omhlophe, ibhere elimnyama, neempungutye zidla ngokufika kule ndawo.
Misa ngeZiko leeNdwendwe le-Elk Country ukufumana iingcebiso eziluncedo malunga nendlela yokwenza uninzi lwe-adventure yakho egcwele i-elk. Iziko likumgama oziikhilomitha ezi-3 kuphela kwaye lidumile kangangokuba lifumana iindwendwe ezingaphezu kwama-400,000 ngonyaka. Abasebenzi babo bolondolozo abaqeqeshiweyo nabafundileyo bakulungele ukufundisa nokubethelela uxabiso ngobuhle bendalo kunye nommangaliso ofumaneka kwilizwe leelk lasePennsylvania!
Uhambo oluya "ePhezulu kweHlabathi," lufumene iikhilomitha ezingama-20 kuphela. Imbonakalo entle ikufuphi neFred Wood Trail ebonelela ngeemayile ezi-4.57 zamatye amangalisayo kunye nee-vistas ezi-2 ezimangalisayo.
Chitha imini eSinnemahoning State Park, iikhilomitha ezingama-32 ukusuka e-'Elk Terrace Lodge.' Kwiinyanga ezifudumeleyo, hamba uhambo olude, ukukhwela ipikiniki, ukukhwela isikhephe kunye nokuloba. Kwiinyanga zasebusika, yonwabele ukutyibiliza ekhephini, ukutyibilika ekhephini, kunye nokutyibiliza emkhenkceni!
Ungaphoswa kukutyelela iKinzua Bridge State Park. Ngaphantsi kweekhilomitha ezingama-56 uya kuba namava okuhamba esibhakabhakeni kunye nedesika yokujonga kwiinqaba eziseleyo zebhulorho kaloliwe eyimbali phezu komwonyo. Uya kuziva ngathi uhamba emoyeni njengoko ujonge kulo mhlaba mhle!
Izimvo eziyi-13 265